Kuipa KweSuzanne Basso
Suzanne Basso uye vashanu vatsigiri vavo, kusanganisira mwanakomana wavo, vakatora mumwe musikana ane makore makumi mashanu nemapfumbamwe akaremara mupfungwa, Louis 'Buddy' Musso, ndokubva amutambudza ndokumuuraya kuitira kuti vagone kuunganidza pamushuwarenzi wehupenyu hwake. Basso akaonekwa semutungamiri weboka uye akakurudzira vamwe kuti vatambudze vatapwa vavo.
Musi waAugust 26, 1998, mumwe mujeri akawana muviri muGalena Park, Texas.
Zvichibva pane zvakaratidzwa mapurisa, pavakasvika panzvimbo yacho, vakafunga kuti uyo akaurayiwa akanga aurawa kune imwe nzvimbo, ndokubva aenderera mberi. Akaratidza kukuvadzwa kukuru, asi zvipfeko zvake zvakanga zvakachena. Ikoko kwakanga kusina chiratidzo chawanikwa pamuviri.
Mukuedza kuziva munhu akabatwa, vatsvakurudzo vakatarisa mafaira evanhu vakashaya uye vakadzidza kuti mukadzi anonzi Suzanne Basso akanga achangobva kuisa mushumo. Apo muchengeti akapinda mumba make kuti aone kana munhu akawanikwa akawanikwa muGalena Park ndiye munhu mumwechete uyo Bhasso akanga ataura kuti akanga asipo, akasangana pamusuo naBasso, mwanakomana wemakore 23, James O'Malley. Basso akanga asiri pamba, asi akadzoka nguva pfupi mushure mekunge muchengeti wacho asvika.
Apo chipurisa chakataura naBasso, akacherechedza kuti paiva nemashizha emagazi uye zvipfeko pamubhedha wepakati pamubhedha weimba yekugara. Akamubvunza pamusoro pazvo uye akatsanangura kuti mubhedha wacho ndewemurume waainge ataura kuti akanga asipo, asi haana kutsanangura ropa.
Iye nemwanakomana wake James vakabva vaenda nemupurisa kuenda kune morgue kuti aone mutumbi wemunhu akabatwa. Vakaratidza mutumbi saLouis Musso, murume waakanga atumira mushumo wemapurisa semunhu ainge asipo., Muchengeti akacherechedza kuti, apo Basso akaonekwa seanonyangadza pakuona muviri, mwanakomana wake James haana kuratidza manzwiro paakaona mamiriro ezvinhu anotyisa yemuviri wehama yavo inourawa.
Sekuziva mutumbi, amai nemwanakomana vaiperekedza muchengeti kumapurisa kuti vapedzise mushumo. Maminitsi mashomanana mushure mekunge muchengeti wacho atanga kutaura naOmalley akareurura kuti iye, mai vake nevamwe vana- Bernice Ahrens, 54, mwanakomana wake, Craig Ahrens, 25, mwanasikana wake, Hope Ahrens, 22, uye mukomana wesikana wake, Terence Singleton , 27, vose vakapinda mukurova Buddy Musso kuti vafe.
OMalley akaudza vaongorori kuti mai vake ndivo ndivo vakagadzirira kuponda uye vakatungamirira vamwe kuti vauraye Musso kuburikidza nekurohwa nechisimba kwemazuva mashanu. Akataura kuti aitya mai vake, saka akaita sezvaakarayira.
Akabvumiranawo kuti awedzere Musso kane kana mashanu mubhajiro yakazara nemishonga yekuchenesa misha uye bleach. Basso akadurura doro pamusoro pemusoro wake apo O'Malley akamutsvaira ropa nemabheji esimbi. Izvo zvakaramba zvisingazivikanwe kana Musso akanga afa kana kuti pakufa panguva yechipikisi yemvura.
OMalley akapawo ruzivo pamusoro pekupi boka racho rakanga rareva uchapupu hwekuponda. Vatsvakurudzo vakawana zvinhu zvakashandiswa kuchenesa nzvimbo yeuponda iyo yakaisanganisira zvipfeko zvine ropa zvakapfekedzwa naMusso panguva yekufa kwake, magirazi epurasitiki, tirasi yeropa, uye kushandisa razors.
Achinetseka Kufa Kwake
Maererano nedare remabhuku, Musso akanga ari chirikadzi muna 1980 uye aiva nemwanakomana. Mukufamba kwemakore akave akaremara mupfungwa uye akava neuchenjeri hwemakore ane makore manomwe, asi akanga adzidzira kurarama ari oga. Akanga ari kugara mumusha wakabatsiriwa muCliffside Park, New Jersey uye aive nebasa renguva yakazara paVitoloRite. Akaendawo kuchechi kwaaive neshamwari yakasimba yevamwe vaifarira nezvehupenyu hwake.
Mapurisa akawana kuti, mwedzi miviri mushure mekufa kwemukomana wake anorarama-mu, Suzanne Basso, aigara kuTexas, akasangana naBuddy Musso mukanisi chechechi paakanga ari parwendo rwokuNew Jersey. Suzanne naBuddy vakaramba vachiita hukama hwemarefu kwegore. Basso pakupedzisira akagutsikana Musso kuti aende kure nemhuri yake neshamwari kuJacinto City, Texas, pamusoro pevimbiso yokuti vaviri vaizoroorwa.
Mukatikati yaJune 1998, akapfekedza hove itsva ye cowboy yaakanga atenga kuti awane chiitiko chacho, akaunganidza zvinhu zvishoma zvake, akaudza shamwari dzake, uye akabva kuNew Jersey kuti ave ne "mudzimai wake". Akaurayiwa zvine utsinye masvondo gumi nemazuva maviri gare gare.
Musi waSeptember 9, vatsvakurudzi vakatsvaga imba yaBasso yaJacinto guta duku rakaoma. Mukati mehutsvina, vakawana inshuwarisi yehupenyu paBuddy Musso nebhadharo rebhadha re $ 15,000 uye chirevo chakawedzera chirevo kune $ 65,000 kana rufu rwake rwuri kutongwa mhosva yechisimba.
Mapurisa akawanawo Musso's Last Will uye Testamendi. Akange asiya pfuma yake uye inshuwarisi yehupenyu hwake kune Basso. Kuda kwake zvakare kuverenga kuti "hapana mumwe munhu aifanira kuwana zana." James O'Malley, Terrence Singleton, naBernice Ahrens vakasimwa sezvapupu. Vose vaizobatsira vose mukuponda kwake.
Vapikisheni vakawana kopi yakaoma yeMusso's Will yakanyorwa muna 1997, asi iyo yakakurumbira kopi yeAda yake pakombiyuta yaiva musi waAugust 13, 1998, mazuva gumi nemaviri Musso asati aurayiwa.
Nhoroondo dzeBhangi dzakawanikwa dzichiratidza kuti Basso akanga ari mariing Musso's Social Security checks. Mamwe mapepa akaratidza kuti Basso akanga aedza kubudirira kuronga kutora kutungamira mari yeMussocial Social income.
Zvaiita sokuti mumwe munhu akanga arwisana nechikumbiro, zvichida muzukuru waMusso akanga ari pedyo naye, kana shamwari yake yaivimbwa naAl Becker, uyo aive achitora mararamiro ake kwemakore makumi maviri. Paivawo nekodzero yekudzivisa kurambidza hama dzaMusso kana shamwari kushamwaridzana naye.
Mumwe nomumwe wevatadzi vatanhatu vakareurura kune zvidimbu zvakasiyana zvekubatanidzwa mukuuraya kwaMusso uye kuedza kuvhara shure. Ivo vose vakabvuma kusaregera kuchema kwaMusso kubatsirwa.
Mutsamba yakanyorwa, Basso akataura kuti aiziva kuti mwanakomana wake neshamwari dzakawanda vakarova uye vachishungurudza Musso kwekuda kwezuva rose vasati vafa, uye kuti akarova Musso. Akabvuma kuendesa motokari yaBernice Ahrens, pamwe nemuviri waMusso muchitokisi, kune nzvimbo iyo O'Malley, Singleton, naCraig Ahrens vakasiya mutumbi ndokubva vaenda kune dumpster uko vamwe vaine humwe humwe uchapupu hunoparadza.
Bernice Ahrens naCraig Aherns vakabvuma kurova musso, asi vakati Basso ndiye ari kuvamanikidza kuti vaite. Bernice akaudza mapurisa, "(Basso) vakati taifanira kuita chibvumirano, kuti hatigone kutaura pamusoro pezvakaitika.Akati kana tikashatirana isu hatigoni kutaura."
Terence Singleton akareurura nekurova nekukanda Musso, asi akaratidza munwe kuBasso nemwanakomana wake James semhosva yekutonga kuguma kwekupedzisira kwakakonzera rufu rwake.
Tariro yeArt Ahrens 'yakanga isinganzwisisiki, kwete kunyanya kutaura nezvezvaakataura, asi nekuda kwezviito zvake. Maererano nemapurisa, Hope akataura kuti akanga asingakwanisi kuverenga kana kunyora uye aida kudya asati ataura chirevo chake.
Mushure mekunge achinetsa terevhizheni yeTV, akaudza mapurisa kuti akarova Musso kaviri nemusango wemapuranga mushure mekunge aputsa Mickey Mouse yekushongedza uye nokuti aida kuti iye naamai vake vafe.
Paakamukumbira kuti arege kumurova, akamira. Akataura zvakare mhosva yeBasso uye O'Malley, avo, vachibvumirana nemashoko aBernice naCraig Aherns, avo vainge vakagadzirisa kupedzisira kwekupedzisira kwakamuuraya.
Apo mapurisa akaedza kuverenga mazwi ake zvakare kwaari, akaibvisa iyo ndokukumbira imwe kudya kweTV.
Pasina nguva Musso akatamira kuTexas, shamwari yake Al Becker yakaedza kumubata kuti aongorore mararamiro ake, asi Suzanne Basso vakaramba kuisa musso pafoni. Achinetseka, Becker akabatana nemasangano akasiyana-siyana eTexas achikumbira kuti aite chekuchengetedza hutano kuMusso, asi zvikumbiro zvake hazvina kupindurwa.
Vhiki imwe isati yaurayiwa, muvakidzani akaona musso uye akacherechedza kuti akanga ane ziso rakasviba, marwadzo uye kupwanya kweropa pameso ake. Akabvunza Musso kana achida kuti adzorere ambulensi kana mapurisa, asi Musso akangoti, "Iwe unodana chero munhu, uye achangondirova zvakare." Muvakidzani haana kuitwa.
Musi waAugust 22, mazuva mashomanana vasati vaurawa, mapurisa eHouston vakapindura pamusana wekurova kunofamba pedyo neJacinto City. Asvika pachiitiko chacho, akawana Musso achitungamirirwa naye naJohn O'Malley, naTerence Singleton mune izvo mukuru mukuru akarondedzera seuto rehondo. Mukuru wehurumende akataura kuti maziso maviri eMusso akanga asvibiswa. Paakabvunzwa, Musso vakati vatatu veMexico vakanga vamurova. Akataura zvakare kuti akanga asingadi kumhanya zvakare.
Mukuru wehurumende akadzingirira varume vatatu kuimba yaTurrence Singleton uko akasangana naSuzanne Basso uyo akati aiva musete wemutemo weMusso. Basso akatsiura majaya maviri uye akanyaradza musso. Achifunga kuti Musso akanga ari mumaoko akachengeteka, mupurisa akabva.
Gare gare, nheyo yakawanikwa mune rimwe raviri raMusso rakanyorerwa kune shamwari muNew Jersey. "Iwe unofanira kuwana ... pasi apa uye ndibvise pano," chinyorwa chakanyorwa. "Ndinoda kudzokera kuNew Jersey nokukurumidza." Zviri pachena kuti Musso haana kumbova nemukana wekutumira tsamba yacho.
Mazuva mashanu eGehena
Kuvhiringidzwa kwakaitwa naMasso kutsungirira vasati vafa kwakanyatsotsanangurwa mumupupuriro wematare.
Mushure mekusvika kuHouston, Basso akabva atanga kubata Musso semuranda. Akanzi apiwe urongwa hurefu hwemabasa uye aizowana kurohwa kana akakundikana kufamba nokukurumidza zvakakwana kana kupedzisa urongwa.
Musi waAugust 21-25, 1998, Musso akarambidzwa kudya, mvura kana chimbuzi uye akamanikidzwa kugara pamabvi ake pamubhedha pasi uye maoko ake pamutsipa wake kwenguva refu. Paakazorora paari pachake, akaroverwa neBasso kana akarohwa nemwanakomana wake James.
Akarohwa nekumanikidzwa kwechisimba kunotungamirirwa naCraig Ahrens naTerence Singleton. Akashungurudzwa naBernice uye Hope Ahrens. Kurohwa kwaisanganisira kubatwa kazhinji nebhandi, mabhoti e baseball, kurohwa nemasungo akavharidzirwa, kukanganisa, uye kurohwa nezvimwe zvinhu zvakange zvakapoteredza imba. Somugumisiro wokurohwa, Musso akafa manheru eAugust 25.
Mune peji rejiji rejiji yechinomwe, mhirizhonga yakawanda pamuviri waMusso yakanyorwa. Vaisanganisira 17 kucheka kumusoro wake, 28 kudonha kumuviri wake wose, kupisa tsvina, 14 mbabvu dzakaputsika, mazamu maviri akaparadzana, mhete yakaputsika, gumbo rakaputsika, uye bone rakaputsika mumutsipa wake. Ikoko kwakanga kune uchapupu hwokuti kushungurudzika kwechisimba kwakawedzerwa kubva pasi petsoka dzake kusvika kumusoro wake wepamusoro, kusanganisira mazamu ake, maziso nenzeve. Mutumbi wake wakanyorova mu bleach uye pine cleaner uye muviri wake wakatsvairwa nebhurobhu rebhu.
Nhengo nhatu dzeboka racho dzakapomerwa mhosva yekuuraya vanhu vakuru, asi vatsigiri vese vakatsvaga chirango chekufa cheBasso. James O'Malley naTerence Singleton vakatongerwa mhosva yekuuraya uye vakapiwa mutongo weupenyu. Bernice nemwanakomana wake Craig Ahrens vakapomerwa mhosva yekuuraya. Bernice akagamuchira mutongo wejeri wemakore 80 uye Craig akagamuchira mutongo wemakore 60. Hope Ahrens mhosva yakapera mu hung nhengo juri. Akashanda kubvunzurudza uye akatongerwa makore makumi maviri mujeri mushure mekunge apomera mhosva yekuponda nekubvumirana kupupura pamusoro peBasso.
Pakazosvika Bhasso kuedza 11 mwedzi mushure mekunge asungwa, akange awira pasi kubva pamakiromita mazana matatu kusvika pamapiro 140. Akaratidza ari muwiricheya ayo akati aive nemugumisiro wekuve akaoma rutivi rwemuviri mushure mekutora kurohwa kubva kuvarindi varo. Gweta rake rakazotaura zvakare kuti rakange riri nekuda kwechirwere chisingaperi.
Akanyengedza inzwi rekasikana-kadiki, achiti akadzorerwa kumwana hwake. Akataurawo kuti akanga ari bofu. Akanyepa nezvenyaya yeupenyu hwake iyo yaisanganisira nharo kuti akanga ari katatu uye kuti aiva nehukama naNelson Rockefeller. Aizodaro akazobvuma kuti iyo yose yaiva nhema.
Akapiwa ruzivo rwekuteerera uye mutongi akapiwa chirwere chepfungwa uyo akabvunzurudza iye akapupurira kuti akanga ari nhema. Mutongi akatonga kuti aikwanisa kumira . Zuva roga rega Bhasso akaonekwa mudare akataridzika uye aiwanzogunun'una panguva yehupupuriro kana squeal nekuchema kana akanzwa chimwe chinhu chaasingadi.
Hope Ahrens Uchapupu
Pamwe nehuchapupu hunowanikwa nevatsvakurudzi, hupupuriro hwakapiwa naT Hope Ahrens hunogona kunge hwakaipa zvikuru. Hope Ahrens akapupurira kuti Basso naOmalley vakauya naMusso kuimba yeAhrens uye kuti aiva nemaziso maviri madema, ayo aiti akawana apo vamwe veMexico vakamurova. Mushure mekunge vasvika paimba, Basso vakaraira Musso kuti arambe ari pamucheka mutsvuku uye webhuruu. Dzimwe nguva aimuisa pamaoko ake nemabvi, uye dzimwe nguva pamabvi ake.
Pane imwe nguva mukati mevhiki, Basso naOmalley vakatanga kurova Musso. Basso vakamurova, uye O'malley akamuswededza kakawanda paaipfeka mabheti emagetsi ehondo. Hope Ahrens akapupurirawo kuti Basso akarova Musso kumushure nebhokisi rebhoti, akamurova nebhanhire, uye muchengeti wechenesi, ndokukwira pamusoro pake.
Uchapupu hwakapiwa kuti Basso akayera anenge mapaundi mazana matatu panguva yaakakwira kakawanda paMusso apo zvaiva pachena kuti akanga achitambura nemarwadzo. Apo Basso akaenda kubasa, akarayira O'Malley kuti atarise vamwe uye ave nechokwadi chokuti havana kubva mumba kana kushandisa foni. Nguva imwe neimwe iyo Musso akaedza kubva pamubhedha, O'Malley akarova ndokumuswededza.
Pashure pokunge Musso akatsigira kukuvadzwa kubva mukurohwa, O'Malley akamutora muimba yekugezera uye akamushambidza ne bleach, Comet uye Pine Sol, achishandisa brashi yemataini kuti asvike ganda raMusso. Pane imwe nguva, Musso akakumbira Basso kudana ambulensi kwaari, asi akaramba. Ahrens akapupurira kuti Musso akanga achifamba zvishoma nezvishoma uye akanga achirwadziwa kubva pakurohwa.
Dare rejeri rakawana Bhasso ane mhosva yekuponda kwemhosva yekuuraya Musso munguva yekubvuta kana kuedza kumubata , uye kumubhadharo kana chivimbiso chemubhadharo nenzira yehuturo yehushuwarenzi.
Munguva yechipatapata, mwanasikana waBasso, Christianna Hardy, akapupura kuti paaiva mudiki Suzanne akanga amuisa kumubata wepabonde, mupfungwa, mumuviri uye mupfungwa.
Suzanne Basso akatongerwa rufu.
Nhoroondo yeSuzanne Basso
Basso akaberekwa musi waMay 15, 1954, muSchenectady, New York kuvabereki John uye Florence Burns. Aiva nehanzvadzi nevanin'ina vanomwe. Hapana zvokwadi chaiyo inozivikanwa pamusoro pehupenyu hwake nokuti anowanzoreva nhema. Chinozivikanwa ndechokuti akaroora Marine, James Peek, mumavambo 1970 uye kuti vaiva nevana vaviri, musikana (Christianna) uye mukomana (James).
Muna 1982 Peek akapiwa mhosva yekunyomba mwanasikana wake, asi mhuri yakazobatana zvakare. Vakashandura zita ravo kuna O'Reilly uye vakatamira kuHouston.
Muna 1993 Suzanne nemumwe murume anonzi Carmine Basso vakazobatana. Carmine aiva nekambani inonzi Latin Security uye Investigations Corp. Pane imwe nguva akatamira muimba yaBasso, kunyange zvazvo murume wake, James Peek, akanga achiri kurarama ikoko. Haana kumbobvira arambana Peek, asi akataurira Carmine semurume wake uye akatanga kushandisa Basso sezita rake rokupedzisira. Peek akazobuda mumba.
Musi waOctober 22, 1995, Suzanne akaisa hurukuro inoshamisa yechina-peji yekuita chiziviso muHouston Chronicle . Yakazivisa kuti mwenga, ane zita rakanyorwa saSuzanne Margaret Anne Cassandra Lynn Theresa Marie Mary Veronica Sue Burns-Standlinslowsk akanga abvumirana naCarmine Joseph John Basso.
Chiziviso chacho chaiti mwenga akanga ari heiress kuNova Scotia mafuta ane ruzivo, akadzidziswa kuSt Anne Anne Institute muYorkshire, England uye akanga ari muchengeti wemitambo uye pane imwe nguva kunyange musikana. Carmine Basso akaudzwa kuti akagamuchira Congressional Medal of Honor nokuda kwebasa rake muHondo yeVietnam. Chirongwa chacho chakadzorerwa shure kwemazuva matatu gare gare nepepanhau nekuda kwe "zvingaita zvisingazivikanwi." Mari ye $ 1,372 yemusangano yakanga isina kubhadharwa.
Basso akatumira amai vaCarmine tsamba vachireva kuti akanga aberekera mapatya vasikana. Akabatanidza mufananidzo, uyo amai vakazoti pane zvakajeka mufananidzo wemwana akatarisa mugirazi.
Musi waMay 27, 1997, Basso akadana mapurisa eHouston, vachiti aive muNew Jersey, uye akakumbira kuti vaongorore murume wavo muTexas. Akange asina kunzwa kubva kwaari kwevhiki. Achienda kuhofisi yake, mapurisa akawana mutumbi waCarmine. Vakawanawo matavi mazhinji emarara akazadzwa nemasese uye urini. Kwakanga kusina chikafu muhofisi.
Maererano nemotopi, Carmine, ane makore 47, akanga asina kudya uye asina kufa nekudengenyeka kwemasimba nekuda kwekudzoka kwemukati acid. Mumwe muongorori wezvokurapa akaudza kuti kwaive nehutu hwakasimba hweammonia mumuviri. Yakanga yakarongwa kuti yakafa kubva pane zvakasikwa.
Musi waFebruary 5, 2014, Suzanne Basso akaurayiwa neropa rinouraya paHuntsville Unit yeTexas Department of Criminal Justice. Akaramba kuita chirevo chekupedzisira.
Dare Rekunyorwa kweBTK's Confession
Nicholas Yarris: Akaiswa Mukati Kusvika Pakavonekwa Innocent
Nhau yaJohn Battaglia Akauraya Vakunda Vake Kuti Vatsive
Kuipa Kwekufa Rowedzera Musungwa Margaret Allen
Zvinyorwa muGrammar: Kubva "A" kusvika "The" ne "An" uye "Vamwe" Pakati
Pacific University GPA, SAT uye ACT Data
Ngirozi huru dzeMitemo mina: Uriel, Michael, Raphael, Gabriel
Nzvimbo Zvishanu dzePentatonic Scale yeGitare
Right View-Buddhist Eightfold Path
Assassin Bugs, Mhondi Yenyika Yose Inonyengedza
Zvirongwa Pakapedza Kudzidza
Edinboro University of Pennsylvania Admissions
Wana "Ngatitorei" Mathikiti
Mineral Photo Gallery neKutika Kwemakemikari
Zvinyorwa kubva 'Kuzvidzivirira Kuzvombo' neErnest Hemingway
Mabhuku Makuru evakadzi
Mashandisiro Aungaita Multiple Intelligences Kudzidza Muedzo
6 Zvikamu Zvakanakisisa zveimba Gym Equipment for Bodybuilding Training
Marika-Alderton House muAustralia
9 Unofanirwa Nehuni Yenyu Inotevera Inofanira Kuva
9 Vhidhiyo Inopesvedzerwa '(Inyaya Yakapi) Kubwinya Kwemangwanani?'
Kutanga Nguva Yokudzorera kweClassic Motorcycle
Nzira Yokukurudzira Mwana Wako Pamazuva Okuedzwa
Vanyengeri veRedy Mountain Mountain National Park